Markazni Ubayyi ibnu Ka’ab Barattoota 40 hifzii Qur’aanaatiin Eebbisiise - NuuralHudaa
Markazni Ubayyi ibnu Ka’ab Barattoota 40 hifzii Qur’aanaatiin Eebbisiise
Last updated Mar 20, 2022 23
Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti kan argamu markazni tahfiiza Qur’aanaa Ubayyi ibnu Ka’ab, Alhada har’aa, March 20, 2022 barattoota waggaa lamaaf barsiisaa ture haala oowwaa taheen eebbisiisee jira. Barattoonni Afurtamman guyyaa har’aa eebbifaman waggoota lamaan dabraniif Hifzii Qur’aanaa, Ahkaama Tajwiidaa fii Qaraatii gosa Torban Sheikh Abubakar Boonsoo Kojii irratti kan barataa turan yoo tahu, Alhada har’aa bakka hawaasni magaalaa Shaashamannee hedduminaan argametti haala oowwaan eebbifamaniiru.
Sagantaa eebba Huffaazotaa kanarratti keessummoota hirmaatan jidduu;
Sheikh Alii Buttaa
Sheikh Habiib Leencaa
Ustaaz Xaalibu Ridallaah
Sheikh Kadiir Amaan
Majliisonni Naannoolee Murtii Korri walii galaa Mana Marii…
Inistiitiyuutiin Sunnaah Ulamoota 40 eebbisise
Faawundeeshiniin Dubartoota Rufeeydaa fi Baankiin Hijraa…
Sheikh Muhammadnuur Hayaatoo
Sheikh Muzayyan Turaa
Sheikh Umar Muhammad
Sheikh Bashiir Roobaa fii keessummoonni gurguddoon biroo heddu saganticharratti hirmaataniiru.
Sagantaa kanarratti hayyoonni heddu dhaamsa gurguddaa kan dabarfatan yoo tahu, Barnoota diinii sadarkaa Qur’aanaa qofarratti dhaabuu osoo hin taane, dabalataanis akka Ulamoota gurguddaa bakka bu’uu danda’anitti maatiin barattootaa cimsanii hordofuu fi Barnoota garagaraa baratanii akka qaroomuu qaban dhaamsi dabree jira.
Nuuralhudaa	 Jun 11, 2022
Biyyi teenya Itiyoophiyaan waggaa sadi dura, saatalaayitii takka gargaarsa mootummaa Chaaynaatiin gara hawaa…
Biyyoota Buna Dhuguun keessatti yakka ture
Waraana addunyaa lammaffaa
Meeshaawwan Ilma namaatiin hojjatamanii kanneen saffisa guddaa qaban
July 7, 2022 sa;aa 5:17 am Update tahe
Nama eega waraanni goolabamee booda waggaa 30 kophaa isaa…
Baankiiwwan Umrii Dheeraa qaban